Obere oge tupu e gbuo Jizọs, ya na Pita, Jems, Jọn, na Andru kpara nkata. Ná nkata ahụ, ha jụrụ Jizọs ihe ịrịba ama nke ọnụnọ ya na nke ọgwụgwụ usoro ihe a. Mgbe ọ na-aza ya, ya ajụọ otu ajụjụ dị ezigbo mkpa. Ọ jụrụ, sị: “Ònye n’ezie bụ ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, onye nwekwara uche, nke nna ya ukwu mere onye na-elekọta ezinụlọ ya, ka ọ na-enye ha nri ha n’oge kwesịrị ekwesị?” (Matiu 24:3, 45; Mak 13:3, 4) Ihe Jizọs ji ajụjụ ahụ na-ekwu bụ na yanwa, bụ́ nna ha ukwu, ga-ahọpụta “ohu” ga na-enye ndị na-eso ụzọ ya nri ime mmụọ n’oge ikpeazụ a. “Ohu” ahụ abụghị naanị otu onye. Oleezi ndị ha bụ?
Ha bụ ezigbo Ndị Kraịst Chineke ji mmụọ nsọ tee mmanụ. Ha na-enye Ndị Kraịst ibe ha nri ime mmụọ n’oge kwesịrị ekwesị. Ọ bụ hanwa ka anyị lekwasịrị anya ka ha na-enye anyị ‘nri ga-ezuru anyị n’oge kwesịrị ekwesị.’—Luk 12:42.
Ohu ahụ na-akụzi eziokwu dị na Baịbụl, ha jikwa ọrụ ikwusa ozi ọma Jizọs nyere ha kpọrọ ihe. Ọ bụ ya mere Jizọs ji sị na ha kwesịrị ntụkwasị obi. Jizọs kwukwara na ha nwere uche. Nke a gosiri na ha na-akpachapụ anya elekọta ihe niile o nwere n’ụwa. (Ọrụ Ndịozi 10:42) Taa, Jehova na-enyere ọtụtụ ndị aka ka ha bata n’ọgbakọ ya. Ọ na-enyekwara ohu ahụ aka ka ha na-enye ha niile nri ime mmụọ ga-ezuru ha.—Aịzaya 60:22; 65:13.
mailto:?body=Ònye Bụ “Ohu ahụ Kwesịrị Ntụkwasị Obi, Onye Nwekwara Uche”?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012160%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ònye Bụ “Ohu ahụ Kwesịrị Ntụkwasị Obi, Onye Nwekwara Uche”?